We.com.mm - Katy Perry နဲ့ Taylor Swift တို့ကွားက Bad Blood တှေ တကယျပွီးဆုံးသှားပွီလား
ကငျြးပနပွေီးဖွဈတဲ့ Taylor Swift ရဲ့ Reputation Stadium Tour အတှကျ Katy Perry ဟာ Rep Tour ကို ဂုဏျပွုပေးတဲ့အနနေဲ့ Taylor Swift ဆီ မထငျမှတျထားတဲ့ လကျဆောငျတဈခုကို ပိုလာပေးခဲ့ပါတယျ။ ထိုလကျဆောငျကတော့ Olive Branch ပဲဖွဈပါတယျ။ Taylor ဟာ လကျဆောငျကို လကျခံရယူပွီးတဲ့နောကျ “Thank you, Katy” ဆိုပွီး Instagram Story မှာတငျထားပွီ “This mean so much to me” ဆိုပွီးလညျး ပွောထားပါသေးတယျ။
Katy Perry ဘကျကလညျး “ Hello old Friend, I’ve been doing some reflection on past miscommunications and hard feelings between us. I really want to clear the air. I’m deeply sorry for…” ဆိုပွီးတော့ သူတို့နှဈရဲ့ အတိတျမှာ အထငျလှဲမှုတှေ အဆငျမပွမှေုတှမြေားစှာရှိခဲ့ကွတာတှကေို အသုံးသတျရှငျးလငျးခငျြပါတယျဆိုတဲ့အကွောငျးကို ရေးထားတာတှရေ့ပါတယျ။
Katy ပေးတဲ့ Olive Branch လကျဆောငျဆိုတာ ငွိမျးငွိမျခမျြးခမျြးဖွဈခငျြပွီ ဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယျကို ဆိုလိုတဲ့သဘောဖွဈပွီး မကွာသေးခငျက ထှကျရှိထားတဲ့ Taylor ရဲ့ End Game သီခငျြးမှာ သူတို့ ၂ ယောကျပွနျလညျသငျ့မွတျနကွေပါပွီးဆိုတဲ့ ကောလဟာလဟာ ဒီတဈခါ တကယျကိုဖွဈလာပွီးဆိုတော့ သူတို့ ၂ ယောကျစလုံး အမာခံပရိသတျတှလေညျး ဒီသတငျးအတှကျ တကယျကို ဝမျးသာပီတိဖွဈနမေယျလို့ယုံကွညျပါတယျ။
Katy Perry နဲ့ Taylor Swift တို့ကြားက Bad Blood တွေ တကယ်ပြီးဆုံးသွားပြီလား
ကျင်းပနေပြီးဖြစ်တဲ့ Taylor Swift ရဲ့ Reputation Stadium Tour အတွက် Katy Perry ဟာ Rep Tour ကို ဂုဏ်ပြုပေးတဲ့အနေနဲ့ Taylor Swift ဆီ မထင်မှတ်ထားတဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုကို ပိုလာပေးခဲ့ပါတယ်။ ထိုလက်ဆောင်ကတော့ Olive Branch ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Taylor ဟာ လက်ဆောင်ကို လက်ခံရယူပြီးတဲ့နောက် “Thank you, Katy” ဆိုပြီး Instagram Story မှာတင်ထားပြီ “This mean so much to me” ဆိုပြီးလည်း ပြောထားပါသေးတယ်။
Katy Perry ဘက်ကလည်း “ Hello old Friend, I’ve been doing some reflection on past miscommunications and hard feelings between us. I really want to clear the air. I’m deeply sorry for…” ဆိုပြီးတော့ သူတို့နှစ်ရဲ့ အတိတ်မှာ အထင်လွဲမှုတွေ အဆင်မပြေမှုတွေများစွာရှိခဲ့ကြတာတွေကို အသုံးသတ်ရှင်းလင်းချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
Katy ပေးတဲ့ Olive Branch လက်ဆောင်ဆိုတာ ငြိမ်းငြိမ်ချမ်းချမ်းဖြစ်ချင်ပြီ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ဆိုလိုတဲ့သဘောဖြစ်ပြီး မကြာသေးခင်က ထွက်ရှိထားတဲ့ Taylor ရဲ့ End Game သီချင်းမှာ သူတို့ ၂ ယောက်ပြန်လည်သင့်မြတ်နေကြပါပြီးဆိုတဲ့ ကောလဟာလဟာ ဒီတစ်ခါ တကယ်ကိုဖြစ်လာပြီးဆိုတော့ သူတို့ ၂ ယောက်စလုံး အမာခံပရိသတ်တွေလည်း ဒီသတင်းအတွက် တကယ်ကို ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
Dua Lipa နဲ့ Collaboration လုပျမယျ့ BLACK PINK
တောငျကိုရီးယား သမ်မတရဲ့ ဆုခြီးမွငျ့ခွငျးကို ခံရတဲ့ BTS